Authorship Plugin yeWordPress | Martech Zone
Chitatu, Kukadzi 29, 2012 NeChishanu, Gunyana 27, 2013 Douglas Karr
Ndanga ndichirova kambani dzese dzandinoziva kutora mukana weiyo kugona kugona kunyora iyo Google yakaunza kumusika. Ndakaona kuwedzera kwakanyanya mukubaya-pamapeji edu ekutsvaga enjini uyezve nevaverengi vedu. Wakaneta here neni kutaura nezvazvo? Zvakanaka, zvakatove nyore izvozvi kuti ugone kunyora zvinhu muWordPress nekutenda kune inoshamisa plugin, inonzi AuthorSure.
Plugin yavo inopa zvese zvinodikanwa… kuwedzera kune mamwe mashoma akanaka - kusanganisira kutsikisa yako munyori bios pane zvinyorwa zveblog, kuumba peji rakakura remunyori, uye kutsikisa ruzha rwemashoko. Iyo plugin inotoshandira multi-munyori mablog.
Takanyora toni yekodhi uye taifanirwa kunyatsoisa yedu theme yeWordPress kuti izvi zvese zviitike… ndinoshuva dai takava neiyi plugin kumashure uko! Heano mamwe screenshots kubva kwavo saiti iyo inoratidza akasiyana maficha:
Kana usati waita maturusi ekunyora ... zviite IZVOZVI! Uye uve shuwa kupangira vanhu kuAuthorSure nekuita rakadai basa risinganakidze. Iye zvino tinofanirwa kushanda pakubvarura imwe yekodhi yedu kuti tikwanise kushandisa iyi plugin!
Tags: plugin yekunyoraplugin yekunyora ye WordPressauthorureWordpress yekunyora plugin
B2B Kufaira uye Kufungidzira neMintigo
Mar 1, 2012 pa 6: 17 PM
Ndatenda nekutaura iyo AuthorSure plugin - kungo taura kana paine munhu anoda kuyedza isu parizvino tiri kubatsira vanhu kuti vagadzire.
Zviri nyore kunamatira KANA dingindira rako richiedza kuita markup ekunyora uye kuita fungidziro pachinzvimbo chako, kana rimwe dambudziko ratakaona ndere apo vanhu vakaedza kuita markup uye chero chikonzero chisina kushanda, saka vanoedza kuwedzera iyo plugin. Iwe unofanirwa kuchenesa kunze kwako kwese kuyedza usati waisa. Zvisinei, isu tinobatsira kana paine munhu anoda ruoko.
Mar 4, 2012 pa 10: 53 PM
Kutenda nekugovana izvi. Ndakaona Google Authorship ichiita uye ndakashamisika kuti ndingaiwana sei. Zvino ndinoziva.